मुना कार्की ह’त्याका’ण्ड : सि’सी क्या’मेरामा देखियाे का’मदारकाे त्य’स्ताे दृश्य ! - KrazyNepal
मुना कार्की ह’त्याका’ण्ड : सि’सी क्या’मेरामा देखियाे का’मदारकाे त्य’स्ताे दृश्य !
काठमाडौं । मन्त्रालयका पूर्व सचिव अर्जुन कार्कीकी पत्नी मुनाको ह’त्या कामदार विजय चौधरीले गरेको पुष्टि भएको छ । पूर्व सचिव कार्कीकाे ललितपुरस्थित घरमा राखिएको सि’सी क्यामेराबाट मुनाको ह’त्या कामदार चौधरीले नै गरेको पुष्टि भएको हो ।मुनाको ह’त्यापछि चौधरीले झु’न्डिएर आ’त्महत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ । भान्छामा राखिएको पि’र्काले हि’र्काएर चौधरीले मुनाको ह’त्या गरेको प्रहरीको भनाइ छ । सि’सि क्यामरामा चौधरीले मुनालाई घाँटीमा स’मातेर घि’सार्दै लगेको दृश्य देखिएको प्रहरीले उल्लेख गरेको छ ।
प्रहरीका अनुसार दृश्यमा चौधरीले मुनालाई आ’क्रमण गरेको समेत देखिएको छ ।विहान १० वजेर २० मिनेटको सयममा विजय भान्सा को’ठा प’स्छन । खाना प’काईरहेकी मुनाको घाँटीमा प’छाडिबाट डोरी ल’गाएर र ब’ल ल’गाएर उनलाइ भू’इँमा ल’डाए ।भुईमा ल’डेकी मुना प्र’तिवाद गर्छिन् तर पनि चौधरी कपाल स’मातेर जो’डतोडले टाउको भु’ईमा ठो’काउँछन् । करीव पाँच मिनेट ला’मोे या’तनाबाट शि’थिल बनेकी मुनालाई न’जिकै रहेको प’लाष्टिकको पि’र्काले टाउको र अ’नुहारमा जो’डतोडले हि’र्काउँछन्, मुनाको टाउकोमा हि’र्काउँदा हि’र्काउँदै पि’र्का समेत दुई टु’क्रा हुन्छ ।
मुना अ’चेत हुन्छिन्, त्यसपछि का’मदार चौधरी आफ्नो साथमा रहेको डोरी लि’एर डा’इनिङ रुपको अगाडि ढोका छेउमै आ’त्महत्या गर्छन् । सि’सिक्यामेरा फु’टेज अनुसार, विहान १०.२० देखि १०.४० वजेसम्म उक्त ह’त्या घ’टना भएको हो ।चौधरीलाई कार्की परिवारले सानै देखि घरमा पा’लेका थिए । कार्की पत्नी मुना र का’मदार चौधरीबीच कुनै रि’सीबीले यस्तो घ’टना भएको हुन सक्ने प्रहरीको अ’नुमान छ । घ’टनाका बेला पूर्व सचिव कार्की भने घरमा थिएनन् । कार्की बिहानै पशुपतिनाथ द’र्शनका लागि गएका थिए ।
पशुपतिबाट फ’र्किएर आउँदा उनले घरमा र’क्ताम्य स्थि’ति र पत्नी अ’चेत अवस्थामा देखे । त्यसपछि उनले प्रहरीलाई खबर गरेर पत्नीलाई स्टार अस्पताल पु’र्याएर । अ’न्तत पत्नी मुनाको पनि अस्पताले मृ’त घोषणा गर्यो । घ’टना बारे प्रहरीले बिस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ ।